Kiosk Eposter Led Indonezia, Player Advertising Advertising anatiny, P2.5 anatiny. Poster, Fitaovana Fampahalalana voaroaka anatiny
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Kiosk Eposter Led anatiny,Indoor Led Advertising Player,P2.5 anatiny anatiny Ad. Poster,Mpanadihady anatiny anatiny manan-tsaina,,
Home > Products > Led Kiosk Poster > Kiosk Eposter Led anatiny
Kiosk Eposter Led anatiny
Ny vokatra avy amin'ny Kiosk Eposter Led anatiny , mpanofana manokana avy any Shina, Kiosk Eposter Led anatiny , Indoor Led Advertising Player mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny P2.5 anatiny anatiny Ad. Poster R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Ny jiro LED anatiny
Fonosana: Kitay hazo + kitapo Nylon
Manana fahafaha-manao: 7000sets/year
Ny jiro LED anatiny A LED fampisehoana, Rental Hitany Display, Outdoor Hitany Flag Screen dia fisaka tontonana maneho izay mampiasa ny nahay ny l' ight emitting diodes toy ny teboka ho an'ny lahatsary maneho ny famirapiratany mamela azy ireo mba ho ampiasaina any an-tokotany izay Mangarahara Hitany Asehoy dia...
Manaova fahatsapana mety sy mamorona fijanonana vaovao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Xposter --- Ny efijery nitarika fanaraha-maso ho an'ny fampiharana ara-barotra Xposter dia alàlan'ny efijery fitarihana nitarika izay mahomby, haingon-trano mahomby izay azo amboarina araka ny takian'ny...
Shina Kiosk Eposter Led anatiny mpamatsy
Mpilalao dokambarotra na milina fanamboarana vola --- Led Kiosk Xposter
Ity karazana anatiny misy an'i Xposter ity antsoina koa hoe mpilalao AD nitarika dia iray amin'ireo fampiharana vaovao ho an'ny fampirantiana notarihina. Namboarina avy amin'ny efijery nitarika, mety tsara kokoa sy mora ampiasaina izy io.
Ny asan'ny Xposter dia toy izao manaraka izao:
Ny lanjany mavesatra sy ny lanja maivana. Sariaka ny fametrahana
I Xposter dia namboarina tamin'ny teknolojia farany mba hanome ny mombamomba kokoa sy malefaka. Namboarina tamin'ny lanjan-jiro anodisitra tsara tarehy sy vovon-doko manga aluminiary mba hahatonga ny afisy poster rehetra latsaky ny 35KGS. Mora kokoa sy mora apetraka kokoa.
Plug ary mpilalao Media. Tsy misy fanitsiana.
Amboary ny votoatinao nomerika ao amin'ny haino aman-jery miorina amin'ny haino aman-jery amin'ny alàlan'ny wifi na USB. Mora manaraka ny làlan'ny efijery dia manjary tsotra indrindra ny fandaharam-potoana ny atiny sy ny fanamafisana sarotra.
Aloha azo ampiasaina
Tianao ny haingam-pandeha haingana amin'ny fanaovana servisy ny fanoloana ny module panel avy eo alohan'ny fitaovana fotsiny.
Mifehy mora & asa
Haingam-pandeha ambony sy ny dingana 128 amin'ny fanaraha-maso ny gradation. Tsy mila Pc, Manampy amin'ny vidiny, mampitombo ny fahatokisana ary manatsara ny fandidiana.
Xposter dia rindrambaiko efa ampidirina mialoha ahafahanao mampifandray azy ireo amin'ny PC na fitaovana Android avy amin'ny toerana tokana amin'ny alàlan'ny rj45, wifi, 3G, USD ary HDMI. Izany dia mahatonga azy ho mora be ny mamantatra ny fampisehoana ary mitantana ny filaharana.
P2.5 anatiny anatiny Ad. Poster
Mpanadihady anatiny anatiny manan-tsaina
Fampisehoana Poster Led anatiny